Xulbada (Fenugreek) Dawo Ka Qaalisan $ 1000,000 Oo Aanad Aqoon. Qalinkii Cabdi Caawiye
Tuesday August 13, 2019 - 11:20:41 in Articles by Hadhwanaag News
Dhererka geedka xulbadu wuxuu gaadhaa 2 ilaa 3 feet. Midhaha xulbadu waa midho aad u qadhaadh dhadhan ahaan. Macdanaha ay qaniga ku tahay xulbadu waxaa ka mida iron iyo magnesium. Waxaan halkan idiinku soo gudbin doonaa faa'iidooyin badan oo ay xulbadu leedahay Iyo cuduro badan oo ay dawo ka tahay.
La soco qabaha dambe......